Q&A : ကင်ဆာရောဂါ
You are here: Pyidaungsu Myanmar Mini-Encyclopedia / To A Better Health Article Collection / Diseases / Q&A : ကင်ဆာရောဂါ
အမေး၊ အဖြေ ကဏ္ဍ
ကင်ဆာ ရောဂါ ကုုသ မှုုု ဟာ၊ တစ်နှစ် ကိုု ဒေါ်လာ ကုုဋေ ပေါင်း များစွာ ဝင် နေ တာ မိုု့၊ တကယ် ပျောက် အောင် လုုပ် ဖိုု့ ရည်ရွယ် ချက် ရှိ မည် မ ထင် ပါ။
နောက် ဆုုံး ကြ တော့၊ ဝင်ငွေ တအား ကောင်း တဲ့ စီးပွားရေး လုုပ်ငန်း တစ် ခုု ပါ ပဲ။ highly profitable business.
လောဘ ဦး ဆောင် နေ သော လောက ဖြစ် ပါ တယ်။
အမေရိကန်သမ္မတ Nixon လက် ထက် က တည်း က၊ ကင်ဆာ ကိုု အပြုတ် တိုုက် မယ် ကြော်ငြာ ခဲ့ တာ နှစ် ပေါင်း များစွာ ကြာ ခဲ့ ပါ ပြီ။
မဖြစ် လာ တဲ့ အပြင်၊ တစ်နေ့ တခြား များ လာ တဲ့ အဖြစ် ကိုု ပဲ ကြည့် ပေ တော့ ။
ကုု ရိုုးကုုစဉ် ကုု နေ ကြ ပေ မဲ့၊ ကံအရှိန် မကုုန် သေး တဲ့ လူနာ တွေ မှ အပ၊ လူ တွေ ဟာ ပိုုက်ဆံ တွေ လဲ ကုုန်၊ ရောဂါ ဒဏ်၊ ကုုသမှု ရဲ့ ဘေးတွက် ဆိုုးကျိုး တွေ လဲ အလူးအလိမ့် ခံ၊ ပြု စုု သူ တွေ လဲ ခြေကုုန် လက်ပန်းကျ ၊နောက်ဆုုံး မ တော့ သေ ကုုန် တာ ပါ ပဲ။
ကင်ဆာ သုုတေသန တွေ အတွက်၊ ပိုုက် ဆံ ဒေါ်လာသန်းပေါင်း များစွာ အကုုန် ခံ ပြီး လုုပ် ကြ ပါ တယ်။ လူ တွေ က လဲ ဝိုုင်း လှူ ကြ၊ အသင်း အဖွဲ့ တွေ က လဲ လှူ ကြ၊ အစိုုးရ grant တွေ ပါ ဆိုု ရင် နည်း တဲ့ ငွေ အင်အား မဟုုတ် ပါ။
ဖြစ် လာ ရင် ကုု မဲ့ ဆေး အသစ် တွေ သာ ရှာ နေ ကြ ပြီး၊ ဘယ် သူ က မှ ခန္ဓာကိုုယ် ခုုခံ အား ကောင်း အောင် ဘယ် လိုု နေ ရ မယ် ဆိုု တာ မ ပြော ပြ ကြ ပါ။
ကျွန်မ အမြင် က တော့၊ ခန္ဓာကိုုယ် ခုုခံ အား ကောင်း လာ တာ နဲ့ အမျှ ကင်ဆာ ဖြစ် နှုံး ဟာ ကျ သွား မယ်။ လူ တွေ ကျန်းမာ လာ ကြ မယ်။
ဒီ လိုု မျိုး ဖြစ် လာ ရင်၊ ကုုဋေ ပေါင်းများစွာ ဝင် နေ တဲ့ ဆေး ကုုသ မှု နဲ့ သက် ဆိုုင် တဲ့ လုုပ်ငန်း တွေ အား လုုံး ဒုုက္ခ ရောက် ပြီ လေ။
သူတိုု့ ပိုုက်ဆံ ကိုု ရိုုက်ယူ သ လိုု ရ နေ တဲ့ လုုပ် ငန်း ကိုု၊ အထိ ခိုုက် ခံ ပါ့ မ လား ဆိုု တာ ဉာဏ် ရှိ သူ တိုုင်း စဉ်းစား ကြည့် လိုု့ ရ ပါ တယ်။
ဗဟုုသုုတ ရှိ တဲ့ သူ ဆိုု ရင်၊ ကိုုယ့် ကျန်း မာရေး ကိုု ကိုုယ် တိုုင် ကြိုးစား ပြီး စောင့် ရှောက် ကြ မယ် ဆိုု ရင်၊ ဒီ လိုု ဆိုုးရွား တဲ့ ရောဂါ မျိုး မှ ရှောင် နိုုင် ကြ လိမ့် မယ် လိုု့ ကျွန်မ မြှော် လင့် သလိုု၊ဆုု လဲနေ့တိုုင်း တောင်းပေးပါ တယ်။
အခုု လိုု တင် ပြ တာ ကျွန်မ ၏ အယူအဆ နဲ့ သုုံးသပ် ချက် သာ ဖြစ် ပါ တယ်။
မိတ်ဆွေ များ အား လုုံး ဗဟုုသုုတ နဲ့ ပြည့် စုုံ ကြ ပါ စေ။
စာရေးသူ - ဒေါက်တာ ဒေါ်ခင်နွယ်ဝင်း
Q&A : BELL'S PALSY ( ဘယ်ဘက်ခြမ်း )
Q&A : Pyridoxal Phosphate
Q&A : နွားနိုု့
Acidic or Alkaline Medium
Apple cider vinegar ပန်းသီး ရှာလကာရည် ဗဟုုသုုတ----
Butter and Ghee ဗဟုုသုုတ ဒါန -----
Cholesterol ချ ဆေး နဲ့ cholesterol level ကျ ချင် သူ တွေ နဲ့ ပတ် သက် လိုု့ ဗဟုုသုုတ -----
CoQ10 အကြောင်း သိကောင်း စရာ ——-
Cruciferous Vegetables ———
Dr.ဒေါ်ခင်နွယ်ဝင်း၏ကျန်းမာရေးဟောပြောပွဲ အမေးအဖြေများမှ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် ကောက်နှုတ်ချက်များ
Fiber ခေါ် အမြှင်ဓာတ် အကြောင်း ———
Fructose သကြား အကြောင်း သိ ကောင်း စရာ------
Functional Medicine ကိုု မိတ္ေဆြ မ်ား နားလည္ ေအာင္ ရွင္း ျပ
Guillian- Barre Syndrome ———
Heart attack ရ သွား သော ဆရာဝန်ကြီး ၏ ဇနီး အကြောင်း ——-
Hepatitis B vaccine နဲ့ ပတ် သက် လိုု့ အရေး ကြီး တဲ့ ဗဟုုသုုတ -----
HPV VIRUS နောက်ဆက်တွဲ
Hyperthyroidism ( Thyroid hormone များ နေ ခြင်း )
Hypothyroid နှင့် ကင်ဆာ နောက် တစ် မျိုး ————-
Iodine ဆား အကြောင်း ဗဟုုသုုတ
Ketogenic diet အ ကြောင်း ပြော ပြ ပါ ဆိုု လိုု့ -----
Melatonin နဲ့ ပတ် သက် လိုု့ -------
Monounsaturated oil , Polyunsaturated oil and Trans Fats
Nutrition ခေါ် အာဟာရ -----
Omega6& Omega3oils
Papillary Thyroid Cancer Stage 1
Parkinson’s disease အ ကြောင်း သိ ကောင်း စရာ ———
Potential for Hydrogen
Q&A : Thyroid Cancer
Q&A : CEA9. 1
Q&A : Coconut Oil Medium Chain Triglycerides
Q&A : H1N1
Q&A : Medium chain triglyceride အုန်းဆီ
Q&A : Medium chain/ Short chain
Q&A : SA node
Q&A : Sustan
Q&A : ကင်ဆာ
Starving Tumors: Fasting Boosts Cancer-Fighting Therapies
Sustan ( Anabolic steroid ) အ ကြောင်း
Thyroid Hormone အ ကြောင်း
Vitamin D3 and D2
Vitamin K အကြောင်း သိ ကောင်း စရာ
VitaminD အကြောင်း ပြော ဖိုု့ ကျန် ပါ သေး တယ် ----
VitaminD3 အကြောင်း ရေး ရ ပါ ဦး မည်.---
ကင်ဆာ ကိုု အောင်နိုုင်သူ များ ဖြစ် ကြ ရန် -----
ကင်ဆာ ဆိုု တာ ဘာ ကိုု ပြော တာ ပါ လဲ?
ကင်ဆာ ဆေး တွေ စျေး အလွန်ကြီး တာ နဲ့ ပတ် သက် လိုု့ --------
ကင်ဆာ တွေ များ လိုုက် ပုုံ က တော့ ------
ကင်ဆာ ဖြစ် ကြောင်း ကျန်းမာရေး ဗဟုုသုုတ ———
ကင်ဆာ မဖြစ် အောင် ကာကွယ် ကြ ရ အောင် ————-
ကင်ဆာ ရောဂါ ဗဟုုသုုတ ———-
ကင်ဆာ ရောဂါ များ လိုုက် ပုုံ က တော့ ———-
ကင်ဆာ ရောဂါ ရှင် နောက် တစ်ဦး----
ကင်ဆာ ရောဂါ သည် များ အလွန် များ ပါ လား -------
ကင်ဆာ ရောဂါ အကြောင်း ဗဟုုသုုတ
ကင်ဆာ လူနာ များ အတွက် စိတ်ဝင်စားစရာ
ကင်ဆာ လူနာရှင် များ အတွက် ဗဟုုသုုတ ဒါန
ကလီစာ အကြောင်း သိ ကောင်း စရာ ------
ကလေးတွေ ကိုု ဘယ် အရွယ် မှ စ ပြီး Vitamin D တိုုက် သင့် ပါ သ လဲ?
ကာကွယ်ဆေး တွေ ထိုုးရန် အားသန် နေ သူ များ အတွက် စဉ်းစား စရာ
ကျန်းမာရေး ဗဟုုသုုတ ကဏ္ဍ ———-
ကျန်းမာရေး ဗဟုုသုုတ ဒါန
ကျန်းမာရေး အသိစိတ် ————
ကျန်းမာအောင် ကြိုးစား ပြီး နေ သော် လည်း ကင်ဆာ ဖြစ် ကြ သူ များ ———
ကျောက် ကပ် ကျောက် မ တည် ရ အောင် ရှောင် သင့် သော အရာ များ ------
ကြက်သွန် နီ အကြောင်း ဗဟုုသုုတ ———-
ခန္ဓာကိုုယ် acidic or alkaline medium သိ အောင် pH strip အသုုံးပြု နေ သူ များ
ခေတ်မီ တိုုးတက် လာ တာ နဲ့ အမျှ ပြောင်း လဲ သွား သော ဆေးကုုသ မှု များ ——
ခေါင်းကိုုက် ခြင်း အကြောင်း
ခံစားချက် များ ——-
စိတ်ရောဂါ နောက်ဆက်တွဲ ---
စုုပေါင်း အင်အား ကြီး သော အား -----
ဆေး ဓားပြ များ ——
တေဇောဓာတ် ချို့ယွင်း ခြင်း
ထင်ရှားသိသာ တဲ့ အစားအသောက် Macronutrients တွေ ကိုု လေ့လာ ကြည့် ကြ ရ အောင် ——-
ဓာတ်စာ ဗဟုုသုုတ ----
ဓားပြ များ အပိုင်း ၃
နွားနို့အစစ်မှပဲ သောက်သင့်တယ်ပေါ့နော်။ -----
နှလုုံးသွေးကြောပိတ်ရာဂါ အကြောင်း ကျန်းမာရေး ဗဟုုသုုတ ဒါန
ဘီပိုုး ကျန်းမာရေး ဗဟုုသုုတ
မိတ်ဆွေ ဆရာဝန် ဇနီး မောင် နှံ အကြောင်း
မှန်ကန် သင့် တော် သော ဆား
ရင်သားကင်ဆာ အကြောင်း သိကောင်းစရာ ------
ရင်သားကင်ဆာ အမေး အဖြေ ——-
ရုုပ်တရား နဲ့ နာမ် တရား အကြောင်း လေး နည်း နည်း ပြော ပြ ချင် ပါ တယ်။
ရောဂါ သက်သာ လာ သူ တွေ အတွက် ဝမ်းသာ မိ ပါ တယ်။
ရောဂါ အတော် များများ ရဲ့ အခြေခံ ——-
လည်ပင်း ဘာ ကြောင့် ကြီး ရ တယ်။
လေးဖက်နာ ကျန်းမာရေးဗဟုုသုုတ ဒါန
ဝိသုုဒ္ဓိမဂ် အ လာ ——
သက်ကြီး ရွယ် အိုု တွေ ပသာဒရုုပ် များ ပြန် အား ကောင်း လာ ရ အောင် -----
သက်ကြီး ရွယ်အိုု များ အစာ မစား နိုုင် ကြ ၍ အိပ်ယာ ထဲ လဲ ကြ တဲ့ အခါ ———
သကြားဓာတ် များ သော အစား အစာ များ
သားဥအိမ် ကင်ဆာ ရောဂါ -----
သားဥအိမ် ကင်ဆာ. Ovarian cancer ———-
သားဥအိမ် ရေအိပ် တည် ခြင်း ( Ovarian cyst )
သံဓာတ် အကြောင်းသိ ကောင်း စရာ———-
သွေး လေး ဖက် နာ ----
သွေး လေးဖက်နာ ရောဂါ ရှင် များ အတွက်
သွေးထဲ မှာ သကြားဓာတ် များ နေ ခြင်း နောက် ဆက် တွဲ ————-
အ ဆီ စား ရ မှာ ကြောက် ကြ သောသူ များ အ တွက် —————
အစားအသောက် အရေး ကြီး ပုုံ ————
အဆီ ဟာ ခန္ဓာကိုုယ် အတွက် ဥပါဒ် ရှိ ၊ မရှိ --------
အဆီ အ ကြောင်း သိ ကောင်း စရာ ------
အဆီ အကြောင်း ဗဟုုသုုတ ကဏ္ဍ
အဆီ အကြောင်း ဗဟုုသုုတ အပိုုင်း၃ ——-
အဆီ အကြောင်း သိ ကောင်း စရာ ————
အနာရောဂါ ကုုစား ပျောက် ကင်း နိုုင် စွမ်း ရှိ တဲ့ သဘာဝဆား ------
အရွက်ရည် ရဲ့ ကောင်း ကျိုး တွေ ကိုု သိ လာ ကြ သူ များ အတွက် -------
အသည်း အဆီ ဖုုံး ခြင်း ——-
အသားဖြူချင်သူ များ အတွက် ဗဟုုသုုတ ဒါန --------
Copyright © 2018. Myanmar Useful References CSR Project.